Thenga i-Modafinil powder: Ukutshisa okutshisayo izidakamizwa omele uzazi! | AASraw Nootropics
/Blog/modafinil/Thenga i-Modafinil powder: Ukutshisa okutshisayo izidakamizwa omele uzazi!
ezaposwa ngomhla 01 / 19 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo modafinil. Ibe 2 Comments.
I-Modafinil, igama leBrama: i-Provigil, luhlobo lweziyobisi ezikhethileyo.
Abantu bathenga i-Modafinil, esetyenziselwa ukuphatha ubuthongo obunzima obangelwa yintlungu yokulala (imeko ebangela ubuthongo obuthathaka kakhulu emini) okanye ukuguqula ingxaki yokulala yokulala emsebenzini (ukulala ngexesha lexesha elivulekileyo kunye nobunzima bokulala okanye ukulala ngexesha lexesha elihleliweyo kubantu abasebenza ebusuku okanye ejikelezayo).
I-Modafinil isetyenziselwa kunye kunye nezixhobo zokuphefumula okanye ezinye iindlela zokukhusela ukulala okugqithiseleyo kubangelwa ukugula okungathintekiyo kwe-apnea / hypopnea syndrome (i-OSAHS; i-disorder disorder lapho isigulane siphelela ukuphefumla okanye siphefumle ngokuphindaphindiweyo ngexesha lokulala kwaye ngoko ayifumani ukulala ubuthongo). I-Modafinil eklasini yemithi ebizwa ngokuba yi-agent ekhuthaza ukuvuka. Isebenza ngokutshintsha ixabiso lempahla ethile yemvelo kwingingqi yengqondo elawula ukulala nokuvuka.
I-Modafinil ayithathi indawo yokulala ngokwaneleyo. Akufanele isetyenziswe ukuphatha ukhathala okanye ukulalisa abantu abangenazo izifo zokulala.
Yintoni iModafinil powder?
I-Modafinil powder yizinto eziphambili zeModafinil, luhlobo lwe-White powder, abaninzi abantu bathenga i-Modafinil powder ukusuka Umthengisi we-Modafinil powder, zenze zonke iintlobo zeefom, njengeModafinil iipilisi kunye neenjini.Ienkcukacha ze-Modafinil powder kwi-AAS njengezantsi:
I-solubility: i-acetone, i-ethanol, i-ethyl ether, i-acetate ye-ethyl, engabikho kwi-water
Imbali ye Modafinil
I-Modafinil, echazwe e-US ukususela kwi-1998 ukuphatha iimeko ezinxulumene nobuthongo ezifana ne-narcolepsy kunye ne-apnea yokulala, iphakamisa ukuphaphama njengokuba i-caffeine yenza. Izifundo ezininzi ziye zacetyiswa ukuba zingabonelela ngezinye iingeniso zengqondo, kodwa iziphumo zazingalingani.
Kuhlalutyo lweemeta olupapashwe kwiYurophu yase-European Neuropsychopharmacology, abaphandi abavela kwiYunivesithi yaseOxford kunye neHarvard Medical School baqukumbele ukuba isilwanyana esibizwa ngokuba yi-modafinil, esetyenziselwa ukuphatha iziphazamiso zokulala, ingumgqugquzeli wokuqonda. Okubalulekileyo, kunokunceda abantu abaqhelekileyo bacinge bhetele.
Ukucima ukudideka, abaphandi ke kwiYunivesithi yaseOxford bahlalutya uphando lwe-24 olupapashwe phakathi kwe-1990 kunye ne-2014 ekhangele ngqo indlela i-modafinil echaphazela ngayo ukuqonda.
Ekuhlaziyweni kwabo, okwakushicilelwe kunyaka ophelileyo kwi-European Neuropsychopharmacology, bafumanisa ukuba iindlela ezisetyenziselwa ukuhlola i-modafinil zichaphazele kakhulu iziphumo. Uphando olwakubonayo kwimiphumo yeziyobisi kwimisebenzi elula-njengokuchukumisa iqhosha elithile emva kokubona umbala othile-akafumananga iintlobo ezininzi.
Nangona kunjalo izifundo zacela ukuba abathathi-nxaxheba benze imisebenzi eyinkimbinkimbi kunye nobunzima emva kokuba bathathe i-modafinil okanye i-placebo bafumene ukuba abo bathatha isilwanyana bachanile ngakumbi, nto leyo ibonisa ukuba inokuchaphazela "imisebenzi ephezulu yengqiqo-ikakhulu imisebenzi yamagosa kodwa nokuqwalasela nokufunda," ichaza ufunde umlobi-mbhali uRuirridh Battleday, ngoku ogqirha kunye noF.D. umfundi kwiYunivesithi yaseCalifornia, eBerkeley.
Izinzuzo ze-modafinil powder
I-Modafinil powder, njengezinto ezibonakalayo ze-modafinil, isisisi esiyingozi, esaziwa ngokuba yi-nootropic. Iyakwenza umsebenzi wakho wokuqonda ngendlela ezahlukeneyo (ngaphezulu kweso sesibini). Kukho izidakamizwa ezininzi, kodwa i-modafinil igxile kwiklasi layo ngenxa yezizathu ezimbalwa, oko kukuthi, nantsi ezinye zeenzuzo ze-modafinil:
I-Modafinil yenza uhlobo olunjenge-stimulant, kodwa ngokwenene i-eugeroic-i-agent-promoting agent. Akunakukwenza ukuba ukhawuleze okanye i-jittery efana neyona nto ivuselela i-classical stimulants. I-Modafinil ayinalo ukuphazamiseka okanye ukuhoxiswa, indlela ezininzi izidakamizwa ezihlakaniphile ezenzayo.
Enyanisweni, i-modafinil inokunceda abantu batyelele izilingo.
nemiphumo embalwa kakhulu
Unemiphumo embalwa ngaphandle kwayo. I-Modafinil iphephile kakhulu. Ndiyichithile ingqondo yam nge-neurofeedback kakhulu kangangokuba andiyi kubona enkulu inzuzo kwi-modafinil ngoku, kodwa ndiyithatha yonke imihla kwi-10 iminyaka kwaye ndabonanga iingxaki zaluphi uhlobo kunye naloo xesha.
Isebenza, Eyona nto. Ngaba uke wambona i-movie engenakulinganiswa noBradley Cooper? Isekelwe kwi-modafinil. Ezi zinto zinikeza ukuphathwa kwengqondo engaphezu kweyabantu, kunye neenkcukacha ezimbalwa.
I-Modafinil powder isebenzela i-Narcolepsy
Ukuqhawula isifo sokulala esichazwe ngokulala ngokugqithiseleyo, ukulala nokukhubazeka, ukugujwa, kunye nakwezinye iziganeko ze-cataplexy (ukukhawuleza okanye ukulahlekelwa ngokupheleleyo kwemisipha, kaninzi kubangelwa yimvakalelo enamandla njengokuhleka). Ukuqhaqhaqhafazeka kwenzeka ngokufanayo kumadoda nakwabasetyhini kwaye kucatshangelwa ukuba kuchaphazele ngokubanzi 1 kubantu base 2,000. Iimpawu zivela ebuntwaneni okanye ebusheni, kodwa abaninzi abantu baneempawu zokugqithwa kweminyaka emininzi ngaphambi kokufumana ukuxilongwa ngokufanelekileyo.
Abantu abaneenqanawa bazizwa belele kakhulu emini kwaye banokulala ngokungaqhelekanga kwimisebenzi eqhelekileyo. Kwixesha lokuhlaselwa, umda oqhelekileyo phakathi kokuphaphama nokulala ubonakala, ngoko iimpawu zokulala zingenzeka xa umntu evukile. Ngokomzekelo, i-cataplexy yi-paralysis ye-muscle yokulala kwe-REM eyenzeka ngexesha lokuvuka. Kudala ukulahleka kwesohlwayo kwesohlunu esenza umhlathi onqabileyo, okanye ubuthathaka beengalo, imilenze, okanye i-trunk. Abantu abane-narcolepsy nabo banokufumana ukuphupha njengengqondo yokuphupha kunye nokukhubazeka njengoko belele ukulala okanye bavuke, kunye nokuphazamisa ubuthongo bokulala nobusuku obuhle.
Kukho iintlobo ezintathu zeengxowa-mbango:
Uhlobo lwe-1: Ulwaphulo lwezintlu kunye ne-cataplexy
Uhlobo lwe-2: I-Narcolepsy ngaphandle kwe-cataplexy, nto leyo ibandakanya ubuthongo obuninzi obusemini
Uhlobo lwe-3: Iinqununu zesekondari Ezi zinto zingabangela ukulimala kwi-hypothalamus, inxalenye yengqondo echaphazelekayo ekulele.
Ukuguqulwa kwesifo njengesifo, kuthintela abantu abaninzi, umsebenzi wabo, ubomi babo, i-Modafinil ezayo, banceda abantu abaninzi, ngokunyusa ukuxhatshazwa kwakho ekukhatheni nasekuphuculeni imizwa yakho.
Iinzuzo zeModafinil powder
Kulabo abanenkxwaleko yokulala, kunokuba luncedo kakhulu ekuvumela ukunyuswa kwengqondo kunye nokuvuka. Inika aba basebenzisi ngengqiqo yokucaca, ukuphucula ingqalelo. Oku kuyinyani ngokukodwa kwizigulane ezithintekayo.
Ukuqhaqhaqhaqhaqha kubangelwa yintsebenziswano ekuphuculeni iip peptides. Ezi peptide zibizwa ngokuba yi-orexins, ezikhankanywe ngasentla. Xa uthatha i-Modafinil, kukholelwa ukuba la ma-neurons asebenze. Oku kucatshangelwa ukuba kwandiswe iinjongo.
Abasebenzisi baye babika ingqondo ephuculweyo. I-Dopamine ikholelwa ukuba idlala indima encinci kwindlela yokusebenza, ngoko oku kuya kudibana.
Unika ii-10-12 iiyure zokuvuka. Yingakho i-Modafinil imele ithathwe ekuseni (ngaphandle kwabasebenzi be-shift shift).
Abasebenzisi bajolise ngakumbi, benze bavelise ngakumbi. Oku kuhambelana nomphumo ofanayo ne-caffeine, ngaphandle kwabasebenzisi abangaboni naziphi na i-jitters. Iziphumo zihlala ixesha elide kune-caffeine.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba i-Modafinil iyanda kwaye igcina umsebenzi wokuqonda xa abasebenzisi basemgangathweni ngokubhekiselele kwimibandela efana nokulahlwa kokulala. Uphando olungakumbi luyafuneka luqhutyelwe ukuqinisekisa ezi zinto ziphumo.
Ekubeni ininzi yezibonelelo zihambelana nokuvuka, abafundi abaninzi bathabatha le nkunkuma ngexesha loviwo lokukhuphisana. Oku kubonwe kwezinye zezikolo eziphambili zaseBrithani. Dibana nodokotela wakho malunga nokusebenzisa i-Modafinil kwisiteji enezongezelelo ezingakumbi zokuphucula.
Iziphumo ezinokuthi zenzeke kwi-modafinil powder
Xa i-Modafinil powder isetyenziswe njengoko iyalathwayo, kuthathwa njengokhuselekile kwaye isebenzayo. Akukho miphumo yecala elibi eliye labikwa. Nangona kunjalo, kukho iimpawu ezinobunzima ezichazwe kusebenziso oluqhelekileyo. Ukuba ufumana ezi zibonakaliso: intloko, ukungabikho kokutya, isisongela, ukulahleka kwesisindo, ukwesaba, kunye negazi eliphezulu, uthetha nodokotela wakho. Kufuneka udibane nogqirha wakho malunga naluphi na uhlobo oluthathaka olunakho.
Ukuba unemiphumo emibi kakhulu, njengaye
umkhuhlane, umqala womqala, intloko, kunye nokuhlanza ngokugqithisa okukhulu, ukuxubha kunye nokukhwabanisa obomvu;
ukunyunyuza, ukubetha okukhulu, ukugubungela, intlungu, ukusilela komzimba;
ukululaza okanye ukuphuma kwegazi;
iipatches ezimhlophe okanye izilonda emlonyeni wakho okanye emlonyeni wakho;
iingcamango, iingcinga ezingaqhelekanga okanye ukuziphatha;
ukuxinezeleka, ukuxhalaba, ukugonywa; okanye
intlungu yesifuba, iintliziyo zeentliziyo ezingalinganiyo.
nceda uxele ugqirha wakho ngokukhawuleza.
Ukuba unemiqathango yempilo yangaphambili, kufuneka uxoxe nodokotela wakho ngaphambi kokusetyenziswa. Iimeko zeentliziyo ngomzekelo kufuneka zixoxwe malunga nokukhuthaza. Kuyafana nokunyamezela kwengcinezelo yegazi, iingxaki zesibindi, imiba yempilo yengqondo okanye ukuxhatshazwa kweziyobisi.
Amanye amayeza anokunxibelelana noModafinil, ukongeza kwimiphumo emibi okanye ukutshintsha indlela amayeza akho asebenza ngayo. Thatha uluhlu lwamachiza wakho kugqirha nawe kwaye ubuze indlela abaza kusebenzisana ngayo ne-Modafinil. Kungcono ukukhuseleka, ukwazi ukuba awuyi kuvelisa nayiphi na ingxaki.
Yintoni eyona nto ibaluleke kakhulu ukuba ndiyazi malunga neefodafinil powder?
Akufanele usebenzise le mayeza ukuba unakekile ukuphendula okanye ukugqithisa isikhumba ngelixa uthabatha i-modafinil okanye i-armodafinil (i-Nuvigil).
I-Modafinil inokubangela ukuba i-skin reaction ibenokuba nzima ngokwaneleyo ukufuna unyango esibhedlele. Yeka ukuthatha eli liyeza kwaye uncedo lwezonyango oluphuculweyo xa unobungozi besikhumba okanye i-hives, i-blisters okanye i-peeling, izilonda zomlomo, inkathazo yokuphefumula okanye ukugwinya, umkhuhlane, ukuvuvukala emilenzeni yakho, umchamo omnyama, ukuphuza okwephumba okanye amehlo, okanye ukuvuvukala ubuso bakho.
Thenga i-Modafinil powder Online
Ngaba ulungele ukuthenga i-Modafinil powder kuwe okanye ukuthengisa? Le ndlela iyona ndlela ingcono yokugqiba isigqibo sokuba unento efuna ukuyenza ukuze uphucule ubomi bakho, kungakhathaliseki ukuba yintoni ibhizinisi okanye ubomi bemihla ngemihla. Ngokuqinisekileyo, kulula kakhulu ukuyila i-Modafinil powder online, ngaphezu koko, ukuhlanzeka kwe-modafinil. Emva kokuba uthenge i-Modafinil powder kwi-intanethi kwaye uqale ukubenza ibe yinto ephelile, uya kufumana ukuba unokuvelisa izidakamizwa ezininzi ngenxa yokuhlanzeka okukhulu, xa abathengi bebathatha imihla ngemihla, baya kuba nako ukuxelela ukuba Eyona njenjalo yongqinisiso olukhulu njengabantu abaninzi besele bathetha. Ukuba ufuna ngokwenene, unokufuna ukugcina isitoreji ngaphezu kokunikezelwa kweenyanga enye.
tags: ukuthenga i-Modafinil powder, Modafinil powder, Abaxhasi beModafinil, i-powder Modafinil
UDkt Patrick Young09 / 11 / 2018 kwi-9: 06 ntambama
Dmitry09 / 11 / 2018 kwi-7: 53
Indlela yokuxuba i-trenbolone e-acetate powder ehlaza?	Indlela yokukhetha umthengi onokwethenjelwa we-sildenafil citrate powder